नयाँ बर्ष, नयाँ योजना, नयाँ प्रेमिका, नयाँ श्रीमान्, एक पटक पढी हेरौँ त ? - धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
नयाँ बर्ष, नयाँ योजना, नयाँ प्रेमिका, नयाँ श्रीमान्, एक पटक पढी हेरौँ त ?
920 पटक पढिएको
प्रकाशित मिति: २०७२, १ बैशाख मंगलवार ०८:३४
‘ नयाँ’ कसलाई मन पर्दैन होला र π नयाँबर्षमा ‘नयाँ योजना’ ‘नयाँ काम’, ‘नयाँ सोंच’, ‘नयाँ बिचार’ ल्याउनैपर्छ । तर, हामीकहाँ केही चिज यस्ता छन्– जुन नयाँभन्दा पुरानोबाटै मज्जा लिनु उपयुक्त हुन्छ । ‘नयाँ लुगा’, ‘नयाँ ठाउँ’, ‘नयाँ गाडी’, ‘नयाँ मोबाइल’जस्तै प्रेमी, प्रेमिका, श्रीमान र श्रीमतीपनि ‘नयाँ’, खोज्न थालियो भने, बुझ्नोस्– तपाईं हाम्रो मन मन्दिरमा खतराको घण्टी बज्न थाल्यो ।
जिन्दगीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रेम र बिबाहपछि पनि ‘नयाँ’को खोजीमा लाग्नुको साटो पुरानोलाई नै ‘पुर्ननिर्माण’ गरेरपनि नयाँपनको स्वाद लिन सकिन्छ । गायीका सञ्जिबनीले त्यसै गाएकी हैनन्– पुरानो हुँदैन मायाँ जुनी जुनी लाएपनि…भन्ने गीत π प्रेम गर्ने तरिका नयाँ नयाँ खोज्नुपर्छ । झगडा गर्ने बिधि नौलो नौलो अपनाउनु पर्छ । ‘हिजो गऱ्यो, हिजै बिर्सियो– घरकी स्वास्नी नयाँ नयाँ ’ भनेजस्तो, प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ, सबै पुराना कुरा नयाँ लाग्न थाल्छन् ।
नयाँ र पूरानो भन्ने कुरा दृष्टिदोषमात्र हो । एक दिन तपाईंकी प्रेमिकाको आँखामात्रै हेर्नोस् । अर्कोदिन तपाईंको प्रेमिको ओठमात्रै नियाल्नोस् । पर्सिपल्ट श्रीमतीको बोलीमात्रै सुन्नोस् । निकोपर्सी श्रीमानको जुँगामामात्रै ध्यान दिनोस् । प्रत्येक दिन नयाँ तरिकाले हेर्नोस् । हरेक महिना भिन्नै पाराले बोल्नोस् । यो बर्ष तपाईंको ‘स्टाईल’ चेञ्ज गर्नोस् । अर्को बर्ष उहाँको ‘फैसन’ फेरिदिनोस् । अनि तपाईंले अनुभव गर्नुहुनेछ– श्रीमान/श्रीमती ‘रिनोभेसन’को मज्जा !
‘नयाँ घर’, ‘नयाँ जागीर’, ‘नयाँ खाना’, ‘नयाँ नाना’जस्तै ‘नयाँ बुहारी’,‘नयाँ ज्वाईं’, ‘नयाँ सन्तान’मात्रै भन्न थालियो भने, बुझ्नोस्– तपाईंको संबन्धको दुनियाँमा महाप्रलयको आतंक शुरु भयो π किनभने नयाँ ज्वाईं भेटेपछि ससुरालीमा पुरानो ज्वाईंको मान घट्छ । नयाँ बुहारी भित्रिएपछि घरमा पुरानी बुहारीको महत्व कम हुन्छ । नयाँ सन्तान जन्मिएपछि परिवारमा अघिल्लो सन्तानप्रतिको ममता चाउरिन पुग्छ ।
त्यसैले ‘नयाँ’को पछि दौडिनेहरुले बुझ्नुपर्छ– संसारमा ‘नयाँ’ सधैं रहँदैन । नयाँ हुनुको अर्थ ‘पुरानो’को शुरुवात हो । ‘नयाँ’ सधैं त्यही अवस्थामा नरहने शास्वत सत्यलाई मध्ये नवर राखेर नयाँ/पुरानाको ‘फ्युजन’लेमात्रै पारिवारिक ‘कन्फ्युजन’ मेटाउँछ । त्यसकालागि, नयाँ बुहारीमा पुरानीको गुण देख्ने, पुरानीमा नयाँ बुहारीको दोष खोज्ने । जेठा ज्वाईंमा कान्छाको बानी मिसाउने, कान्छा ज्वाईंमा जेठा ज्वाईंको ब्यहोरा मिलाउने । पहिलो सन्तानलाईं नयाँ सन्तानको नजरले हेर्ने, नयाँ सन्तानलाई पहिलो सन्तानको झैं संझने ! त्यसपछि पुरानो र नयाँको भेद नै समाप्त भएर हरेक क्षण ‘पहली नजर पहली प्यार’ भएन भने मलाई भन्नु होला ।
नयाँबर्षले ‘नयाँ जिवन’, ‘नयाँ जगत’,‘नयाँ जोश’, ‘नयाँ तागत’ अवस्य ल्याओस् । ‘नयाँ अभियान’, ‘नयाँ लक्ष’ र ‘नयाँ उद्धेश्य’जस्तै पार्टी र नेतापनि ‘नयाँ’ खोज्न थालियो भनेचाहीं, बुझ्नोस्– बिकासको ‘ब’ ‘भ’ ‘म’सम्म पुगेका हामीहरु फेरी ‘क’ ‘ख’ ‘ग’मा नै झर्नेछौं । मान्नोस्, पन्ध्र बर्षे कार्यकालको पहिलो पाँचबर्ष पुराना नेताले आफ्नालागीमात्रै काम गरे । दोश्रो पाँचबर्ष आफन्तकालागि ब्यवस्था मिलाए । र, तेश्रो पाँचबर्ष आफ्ना ‘पकेट क्याडर’को अवस्था मिलाई दिए । अब उनिहरुले गर्नुपर्ने कोही छैनन्, पालो हाम्रै हो ।
तर, हामीले अब नयाँ खोज्यौं भने, नयाँ नेता र पार्टीले पनि उही प्रकृया दोहोऱ्याउने हुन्–आफुलाई, आफ्नालाई र आफन्तलाई ! अनि हाम्रो पालो आईपुग्न त थप थप पन्ध्र बर्ष कुर्नु पर्नेछ । हामीसँग स्यालले खाएपनि नसकिने पार्टी छन् । ध्रुबे हात्तीले कुल्चिएपनि अभाव नहुनेगरी नेताहरु छन् । त्यसैले नयाँ बर्षमा नयाँ नेता र नयाँ पार्टीको भिंड हैन, भएकैलाई ‘पुर्ननिर्माण’ गरेर अगाढी बढ्ने प्रयत्न गरौं । तर नेताको ‘पूर्ननिर्माण’चाहीं कसरी गर्ने हो, त्यो तरिकाचाहीं नयाँ बर्षमा खोजौंला !
अहिलेलाई ‘ह्याप्पी न्यू इयर
स्रोतः डामाडोलक डट कम
२०७२, १ बैशाख मंगलवार ०८:३४ मा प्रकाशित